I-D2 / D3 --- Uninzi lweeklasikhi ezininzi zedrone ye-oblique yekhamera mveliso kunye nabenzi | Imvula
Khetha ikhamera efanelekileyo nefanelekileyo kwiidrones zakho
Ikhamera yokuqala ye-oblique kwihlabathi ngaphakathi kwe-1000g
I-RIY-D2 / i-D3 isetyenziswa ikakhulu kwimiboniso eneempawu ezichanekileyo ezinje nge-1: 500 terrain / cadastral measurement.I-D2 yenzelwe ikakhulu i-UAV ye-rotor, eqokelela idatha yesisombululo esiphakamileyo ukuze ihlangabezane neemfuno ezichanekileyo ze iprojekthi.
Sebenzisa ilensi ngokuzimeleyo ephuculwe yiRainpoo, imifanekiso yoqobo eqokelelweyo icacile kumgangatho, ikhanya ngombala, iphantsi ekugqwethweni komfanekiso, kubukhali kwaye iphantsi ekusasazeni. Imodeli evelisiweyo inemiphetho ecacileyo kunye neekona, eziluncedo ngakumbi kwimephu ye-DLG.
I-D3 luguqulelo lwe-D2 enobude obude obugxile ekulungiseleleni ukuqokelelwa kwedatha kwiindawo ezinobunewunewu obuphezulu bendawo okanye indawo ephezulu yokugcina indawo.
Yeyiphi ifomathi yolwazi oluhlaza, kufuneka ndenze njani ngalo?
ifomathi yeefoto eziluhlaza yile .jpg.
Ngokwesiqhelo emva kohambo lwenqwelomoya, okokuqala kufuneka sizikhuphele kwikhamera, efuna isoftware esiyenzileyo "iSky-Scanner". Ngale software, sinokukhuphela idatha ngesitshixo esinye, kwaye ngokuzenzekelayo sivelise iifayile zebhloko yeContextCapture nazo.
Nxibelelana nathi ukwazi okungakumbi malunga neefoto ezingezizo>
Inkqubo yokufaka kumaqonga ahlukeneyo nokuba yiphiko elimiselweyo le-UAV okanye iinqwelomoya ezincinci?
I-RIY-DG4 PROS inokuxhonywa kuzo zombini ii-rotor ezininzi kunye needrones ezinamaphiko amiselweyo zokufunyanwa kwedatha yokufotwa. ngeenkampani ezininzi zeedrone kwihlabathi liphela, zombini ezinamaphiko amiselweyo kunye neerotor ezininzi kunye neVTOL kunye nehelikopta, kuyavela ukuba zonke zilungelelaniswe kakuhle.
Kutheni ungqamaniso lweelensi ezintlanu zibaluleke kangaka?
Sonke siyazi ukuba ngexesha lokubaleka kwe-drone, kuya kunikwa umqondiso kwi-lens ezintlanu zekhamera ye-obique. Kwithiyori, iilensi ezintlanu kufuneka zivezwe ngokulandelelana, emva koko idatha ye-POS iya kurekhodwa ngaxeshanye.
Kodwa emva koqinisekiso lokwenyani, safika kwisiphelo: eyona nto intsonkothileyo ngemeko yendawo, inkulu idatha enokuconjululwa ilensi, icinezelwe, kwaye igcinwe, kunye nexesha elithathayo ukugqibezela ukurekhoda.
Ukuba isithuba esiphakathi kweempawu zokubangela sifutshane kunexesha elifunwa yilensi ukugqibezela ukurekhoda, ikhamera ayizukukwazi ukwenza ukubhengeza, okuya kubangela "ifoto engekhoyo".
BTW，i ungqamaniso lubaluleke kakhulu kumqondiso we-PPK.
Yintoni ukusebenza ngokukuko kwe-DG4Pros? Ndiziseta njani iiparameter ezifanelekileyo?
I-DJI M600Pro + DG4Eziluncedo
GSD （cm （
Ukuphakama kwendiza （m）
Isantya senqwelomoya （m / s）
Indawo yokusebenza yenqwelomoya enye （km2 （
Inombolo yefoto yendiza enye
Inani leentsuku zeenqwelomoya
Indawo yokusebenzela iyonke Ngenye imini （km2）
Table Itafile yeparameter ibalwe ngokwexesha elingaphezulu kwe-80% kunye nenqanaba lokuwela ngaphezulu kwe-70% （sicebisa ukuba
Idrone enamaphiko + DG4Eziluncedo
indawo yomsebenzi （km2）
Inani leenqwelo moya
Indawo yomsebenzi iyonke
Ngenye imini （km2）
Nxibelelana nathi ukufumana isitshixo>
Ityala eliphumelelayo lokufotwa kwe-oblique
—Sebenzisa imodeli ye-3D ukwenza uphando lwe-cadastral kwiindawo eziphakamileyo
Emva kweminyaka eliqela yophuhliso, ngoku e-China, ukufotwa kwe-oblique kuye kwasetyenziswa kakhulu kwiiprojekthi zophando zasemaphandleni. Nangona kunjalo, ngenxa yokuthintelwa kwezixhobo zobuchwephesha, ukufotwa kwe-oblique kusabuthathaka kwimilinganiselo ye-cadastral yemiboniso emikhulu, ikakhulu ngenxa yokuba ubude bembonakalo kunye nefomathi yemifanekiso yeelensi zekhamera ye-oblique azikho mgangathweni. Emva kweminyaka emininzi yamava eprojekthi, sifumanise ukuba ukuchaneka kwemephu kufanele ukuba kube phakathi kwe-5 cm, emva koko i-GSD kufuneka ibe phakathi kwe-2 cm, kwaye imodeli ye-3D kufuneka ilunge kakhulu, imiphetho yesakhiwo kufuneka ithi tye kwaye icace.
Ngokubanzi, ubude bekhamera esetyenziselwa iiprojekthi zokulinganisa zasemaphandleni zi-25mm nkqo kunye ne-35mm oblique. Ukufezekisa ukuchaneka kwe-1: 500, i-GSD kufuneka ibe phakathi kwe-2 cm. Kwaye ukuqinisekisa ukuba, ukuphakama kwendiza yedrones ngokubanzi kuphakathi kwe-70m-100m. Ngokokuphakama kwenqwelomoya, akukho ndlela yokugqibezela ingqokelela yedatha yezakhiwo eziphakamileyo eziyi-100m. Nokuba uthe wenza uhambo ngenqwelomoya, akunakuqinisekisa ukugqagqana kophahla, okukhokelela kumgangatho ombi wemodeli Kwaye kuba ubude bokulwa buphantsi kakhulu, buyingozi kakhulu kwi-UAV.
Ukusombulula le ngxaki, ngoMeyi 2019, senze uvavanyo lokuqinisekisa ngokuchanekileyo kwe-Oblique Photography yezakhiwo eziphakamileyo ezisezidolophini. Injongo yolu vavanyo kukuqinisekisa ukuba ukuchaneka kokugqibela kwemephu yemodeli ye-3D eyakhiwe yi-RIY-DG4pros oblique camera inokuhlangabezana nemfuno ye-5 cm RMSE.
2. Inkqubo yokuvavanya
Kolu vavanyo, sikhetha i-DJI M600PRO, exhotyiswe ngeRainpoo RIY-DG4pros oblique yekhamera yeelensi ezintlanu.
Indawo yokujonga kunye nolawulo lweendawo zokucwangcisa
Ukuphendula kwezi ngxaki zingasentla, kunye nokwandisa ubunzima, sikhethe ngokukodwa iiseli ezimbini ezinobude obuphakathi kwesakhiwo seemitha ezili-100 zovavanyo.
Amanqaku olawulo abekwe kwangaphambili ngokwemephu kaGOOGLE, kwaye imeko engqongileyo kufuneka ivule kwaye ingathinteleki kangangoko. Umgama phakathi kwamanqaku ukuluhlu lwe-150-200M.
Indawo yokulawula isikwere se-80 * 80, sahlulwe sabomvu satyheli ngakwidiagonal, ukuze kuqinisekiswe ukuba indawo yeziko inokuchongwa ngokucacileyo xa umboniso womelele kakhulu okanye ukhanyiso alwanelanga, ukuphucula ukuchaneka.
UCwangciso lweNdlela ye-UAV
Ukuqinisekisa ukhuseleko ekusebenzeni, sigcine umphakamo okhuselekileyo weemitha ezingama-60, kwaye i-UAV yabhabha kwiimitha ezili-160. Ukuqinisekisa ukugqagqana kophahla, sikonyuse izinga lokudibana. Ixabiso lokugqagqana kobude obude ngama-85% kunye nelona linqamlezileyo li-80%, kwaye i-UAV ibhabha ngesantya se-9.8m / s.
Ingxelo yomoya oNxantathu (AT)
Sebenzisa "iSky-Scanner" (Iphuhliswe yiRainpoo) isoftware ukukhuphela kunye nokusebenza kwangaphambili kweefoto zoqobo, emva koko uzingenise kwiContextCapture 3D yesoftware yokumisela ngesitshixo esinye.
Ingxelo yokugqwetha kwelensi
Ukusuka kumzobo wegridi yokugqwetha, kunokubonwa ukuba ukuphambuka kwelensi ye-RIY-DG4pros incinci kakhulu, kwaye isazinge siphantse sahambelana ngokupheleleyo nesikwere esiqhelekileyo;
Impazamo yokwenziwa ngokutsha kweRMS
Enkosi kubuchwephesha bobuchwephesha beRainpoo, sinokulawula ixabiso le-RMS ngaphakathi kwe-0.55, eyiparameter ebalulekileyo kukuchaneka kwemodeli ye-3D.
Ungqamaniso lweelensi ezintlanu
Kuyabonakala ukuba umgama phakathi kwendawo ephambili yeelensi ezime nkqo kunye neyona ndawo iphambili yeelensi ze-oblique zezi: 1.63cm, 4.02cm, 4.68cm, 7.99cm, thabatha umahluko wesikhundla, amaxabiso empazamo yile: - 4.37cm, -1.98cm, -1.32cm, 1.99cm, umahluko omkhulu wesikhundla yi-4.37cm, ungqamaniso lwekhamera lunokulawulwa ngaphakathi kwe-5ms;
I-RMS yokuxelwa kwangaphambili kunye neyona ndawo yolawulo isusela kwi-pixels eyi-0.12 ukuya kwi-0.47.
3. Ukulinganisa kwe3D
Siyabona ukuba ngenxa yokuba i-RIY-DG4pros isebenzisa iilensi zobude obude, indlu engezantsi kwemodeli ye-3d icace gca. Elona xesha lincinci lokuvezwa kwekhamera linokufikelela kwi-0.6s, ke nokuba izinga lokugqagqana kobude bonyuswe laya kwi-85%, akukho ukuvuza kwemifanekiso kwenzeka. Imigca yeenyawo yezakhiwo eziphakamileyo zicacile kwaye zichanekile ngokuthe ngqo, eziqinisekisa ukuba sinokufumana iinyawo ezichanekileyo kwimodeli kamva.
4. Ukujonga ngokuchanekileyo
Sisebenzisa isikhululo esipheleleyo ukuqokelela idatha yeendawo zokujonga kunye nokungenisa ifayile ye-DAT kwi-CAD. Emva koko ngokuthelekisa ngokuthe ngqo idatha yendawo yokuma kwimodeli ukubona umohluko wabo.
Kolu vavanyo, ubunzima kukuba ukwehla okuphezulu kunye okuphantsi kwendawo, uxinano oluphezulu lwendlu kunye nomgangatho ontsonkothileyo. Ezi zinto ziya kukhokelela ekwandeni kobunzima bokuhamba ngenqwelomoya, umngcipheko ophezulu, kunye nemodeli embi ye-3D, eya kuthi ikhokelele ekunciphiseni kokuchaneka kuphando lwe-cadastral.
Ngenxa yokuba ubude be-RIY-DG4pros bude kuneekhamera eziqhelekileyo ze-oblique, iqinisekisa ukuba i-UAV yethu ingabhabha kwindawo ekhuselekileyo, nokuba isisombululo somfanekiso wezinto zomhlaba siphakathi kwe-2 cm. Kwangelo xesha, iilensi ezinesakhelo esipheleleyo zinokusinceda ukuba sibambe ii-angles ezingaphezulu zezindlu xa sibhabha kwiindawo ezinoxinano oluphezulu, ngaloo ndlela siphucula umgangatho wemodeli ye-3D. Ngaphantsi kwesiseko sokuba zonke izixhobo zekhompyutha ziqinisekisiwe, sikwaphucula ukungqubana kwenqwelomoya kunye nokuhanjiswa kweendawo zolawulo ukuqinisekisa ukuchaneka kwemodeli ye-3D.
Ukufotwa kwe-oblique kweendawo eziphakamileyo zophando lwe-cadastral, kanye ngenxa yokusikelwa umda kwezixhobo kunye nokungabikho kwamava, kunokulinganiswa kuphela ngeendlela zesiko. Kodwa iimpembelelo zezakhiwo eziphakamileyo kumqondiso we-RTK zikwabangela ubunzima kunye nokuchaneka komlinganiso. Ukuba singasebenzisa i-UAV ukuqokelela idatha, iimpembelelo zemiqondiso yesatellite zinokupheliswa ngokupheleleyo, kwaye ukuchaneka ngokubanzi kwemilinganiselo kunokuphuculwa kakhulu. Ke impumelelo yolu vavanyo ibaluleke kakhulu kuthi.
Olu vavanyo luyangqina ukuba i-RIY-DG4pros iyakwazi ukulawula i-RMS kuluhlu oluncinci lwexabiso, ine-3D elungileyo yokumodareyitha, kwaye inokusetyenziswa kwiiprojekthi zokulinganisa ezichanekileyo zezakhiwo eziphakamileyo.
Ubungakanani bekhamera 190 * 170 * 80mm
Ubunzima bekhamera 850g
Inombolo ye-CMOS 5pcs
Ubungakanani woluvo 23.5 * 15.6mm
Inani lamaphikseli (ewonke) 20120mp
Ubuncinane bexesha lokuvezwa ≤1s
Imowudi yokuvezwa kwekhamera Ukubonakaliswa kwe-Isochronic / Isometric
Imowudi yokunikezelwa kwamandla kwekhamera Unikezelo lwamandla olumanyanisiweyo
Ukulungiselela kwangaphambili idatha ISKYSCANNER (GPS)
Ubungakanani bememori 320g
Isantya sekopi yedatha ≥70m / s
Iqondo lobushushu elisebenzayo -10 ℃ ~ 40 ℃